INguni Brand – The Ulwazi Programme
Umswenko yinto edliwayo edolobheni laseThekwini. Ngisho uzihambela nje edolobheni uyazibonela ukuthi ingqephu iyathandwa futhi abantu abazenzisi ngayo. Uma kuza kumswenko nokudlalisa indwangu, abantu abanankinga nokukhokha imali eshisiwe ezimpahleni ngoba phela ukugqoka kahle kuyabajabulisa. Osekunakeke kakhulu manje ukuthi iTheku likhula kakhulu kwingqephu njengoba sebebaningi nabantu asebesungule izinkampani zabo zokwakha, bathengise baphinde bakhangise nangazo izimpahla zabo. Kulokhu sethula inkampani eza kabi ngampela kwezomswenko iNguni brand.
INguni brand inkampani yezimpahla engeyokudabuka eThekwini futhi isingulwe. Kanti ke intshisekelo yabo kanye nohlobo lwezimpahla abazakhayo baphinde bazidayise zisukela ekucebeni kolimu lwesiZulu, isiNdebele kanye nesiXhosa ngoba izimpahla zabo ziveza imibala yesintu yesiZulu naso isiXhosa kanye namaNdebele abangaphansi kohlu lwabantu ababizwa ngamaNguni okuyiwona msuka wokuqanjwa kwegama lezimpahla zabo. Izimaphla zakwaNguni Brand ziwuhlobo lwesimanje ngendlela azikhiwe ngayo kuyasho vele ukuthi zithengwa kakhulu yintsha ethanda ingqephu nomswenko.
INguni brand ayigcini ngokudayisa eThekwini kuphela kodwa izimpahla zabo zitholakala iNingizimu Afrika yonke kanti futhi nabaphesheya kwezilwandle bayakwazi ukuzithola njengoba zidayisa na “online”. Azigcini nje ngobuhle kepha ziphinde zikhombise nobuhle kanye nobukhazikhazi bamasiko aseNingizimu Afrika njengoba ukwenziwa kwazo kususelwe kuwona.
Uhlu lwezimpahla abazidayisayo ama Jackets, Hoodies, Socks, windbreaker, swimwear, marks, ladies’ shorts, ladies tops, kanye nama bucket hats. Uma kukhona imibuzo mayelana nokuthengisa kwezimpahla zabo ungadlulisa imibuzo yakho kulemininingwano, ocingweni batholakala ku 067 223 0514, kanti nge email ungababhalela ku store@ngunistore.co.za. Isitolo seNguni sivulwa ngo-08:00 -17:00 ntambama kusuka ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu njalo ngesonto. Baphinde batholakale nakwi website yabo ethi www.ngunistore.co.za kulaba abafuna ukuthenga izimpahla online. Kuyajabulisa ukubona abasiki bengqephu baseThekwini benyuse izinga njengoba benza nje kwezemfashini.
Categories Culture, News Tags Nguni Clothing Brand